children Archives - Kavyalaya - काव्यालय
by kalpanajoshi कार्तिक ७, २०७७
written by kalpanajoshi
सर्स्युँको बिउमा परेको छिटुवा धानको बाला अलिक अगाडि नै पहेंलो भएको देखेपछि नर्माले खुसी हुँदै टिपेको बाला नाङ्गलोमा कनिका निफल्दै गरेकी बेसरीलाई देखाइन् ।
“चेलीको जातले यत्ति उत्ताउलो हुनु निको होइन”
खुर्कुट्टीमा बसिरहेकी हजुरआमाले क्रोधको संकेत, आमा बेसरीतिर गरेपछि बेसरीले छोरीतिर केही नबोली आँखा तारिन् ।
“स्कुल ड्रेस बदलेर भात खा ।”
बेसरीले यति भन्न नपाउँदै नर्माले खल्तीभित्रै राखेजस्तो जवाफ फ्याट्ट झिकेर भनिन्
“ह्या आमा, आजदेखि त दशैं बिदा सुरु भइसक्यो ! अब भोलि मास्टरदाइले नयाँ ड्रेस सिलाइसकिने भन्नुभएको छ । दशैंमा टिका थाप्न र जाँतमा(जात्रामा) जान त्यो कपडा भइहाल्छ । किन बदल्नुपर्यो र ड्रेस?”
उल्टै प्रश्न गरेर नर्मा अघितिर आफूले टिपेको धानको बालाबाट धान निकाल्न थालिन् । ड्रेसको सर्टको खल्तीमा धानको मुठ्ठी राखेर गाडतिर (नदीतिर) लागिन्, जहाँ उनले अघि स्कुलबाट फर्किँदा नदीको किनारमा पहेंलो रङ्गको पुतली मरेको देखेकी थिइन् । नर्मा नजिकै गइन्, पुतलीलाई हत्केलामा राखिन्, खल्तीबाट एकमुठ्ठी धान र एक रुपैयाँको सिक्का निकालेर पुतलीको नाउँमा बगरमा फालिन् । त्यसपछि पुतलीलाई नदीको बीचमा लगेर बगाइदिइन् । उनले सुनेकी थिइन् मरेकाजति सबैलाई चिसो पानीमा बगाएपछिमात्रै ‘स्वर्ग’ जान्छन् ।
बगरमा रहेका तितेपाती टिपेर आज स्कुलमा भेटेको रबरले बाँधिन् र चुङ्गी स्कर्टको खल्तीमा लुकाएर पानीको जर्किनसहित घरतिरको बाटो लिइन् । अरु दिनको जस्तो जाँगर छैन उनमा आज । पुतली स्वर्ग पुगे नपुगेको चिन्ता छ उनको मनमा ।
“ल नर्मा रोटी र दूध खाइहाल् म धेरै कराउन र फकाउन सक्दिनँ, भनेको मान् !”
खाना खाने समयमा बेसरीका यी वाक्यांश सुन्न नपाउँदै नर्मालाई आफ्नो अठोट याद आयो र उनी झस्किइन् । आफूले अघि नै भात खाएको र दूध पिउन मन नभएको जानकारी गराइन् । उनले भन्न सकिनन् कि आज पुतलीको आत्मशान्तिको लागि छाक् छोडेको । छिटो निन्द्रा लागोस् भनेर उनले दशैं बिदामा दिइएको गृहकार्य सम्झिन थालिन् र नवमीअघि नै गृहकार्यको काम गरिसक्ने योजना बन्दाबन्दै निदाइसकिछिन् ।
मास्टरदाइले ड्रेसको कपडा ल्याइदिनुभएपछिको दिनदेखि प्रत्येक बिहान नर्मा नयाँ ड्रेस लगाएर दशैंको दिन गन्दै फेरि पुरानो कपडा बदल्ने गर्थिन् । उनले पिङ खेल्ने/ खेलाउने कोही साथी नभेटेपछि बेसरीको आँखा छली छली नयाँ किनेर ल्याएको नाम्लो लगेर अम्बाको हाँगामा पिङ खेल्न जान्थिन् । आमाको आवाज सुनेपछि केही न केही बहानामा पहिले नाम्लो लुकाउँथिन् । नर्मालाई दशैंको मनपर्ने पाटो पनि यही हो ।
फूलपातिको दिन बेसरीले फूल टिप्न लगाएपछि नर्मा ठूलो डालो लिएर फूल टिप्न गइन् ।
“यो पाला त तिहारसम्म तेरो भाइ भइहाल्छ होला नर्मा, कोपिला नभाँचिने गरी फूल टिप् !”
पल्लोघरकी काकीले आवाज ठूलो पारेर सुझाइन् । नर्माले फूल टिपिसकेपछि आमाले भनेअनुसार राखिन् । गैराका सबै ‘लाहुरेहरू’ घर आइसक्दापनि आफ्ना बुवा नआएपछि बुवालाई छिट्टै छुट्टी मागेर अहिले नै घरको लागि टिकट काट्न भन्नका लागि उनी हेल्थ पोस्टनिरको पिसिओमा पुगिन् ।
“फोनको लाइनमा खराबी आएको छ । इन्डियाको फोन त्यति प्रष्ट सुनिँदैन अचेल । फोन लागेपछि म डाको लगाउँला है !”
पिसीओ बाजेका यी शब्दले नर्माको निराशाको पहाडमा एक इँट्टा थपिदियो । यो सालपनि बुवासँग जाँत जान नपाइने भयो,उखुको डण्डा हातमा बोकेर बुवाको काँधमा फर्किन नपाइने भयो, सुन्तला र मुम्फली कसले किनिदेला ? यी र यस्तै कुराले मन भारी बनाउँदै घरसम्म आइपुगिन् ।
अष्टमीको दिन गाउँभरिको घरहरूमा बलि दिन भनी बोकाहरू किनेर राखिएको थियो । बेग्लाबेग्लै ठाँउबाट किनेर ल्याइएका जनावरहरू आतुर देखिन्थे एकैसाथ एकै ठाँउमा देउतालाई प्रसन्न गराउन, तब त ज्यानै जानेगरी कराउँदै थिए सबै । रगतको फाउन्डेसन् र अबिरको कम्प्याक्ट पाउडर लगाएका देवी-देवताहरू विवश देखिन्थे नर्माजस्तै ।
“आज हाम्रै घरमा मासुभात खान आइजा है नर्मा दुईवटा बोका भाकल गरेकोले मासु टन्नै हुन्छ ।”
भन्दै कमलाले बुवाले इन्डियाबाट ल्याउनुभएको मिठाई थमाइन् । नर्मालाई भक्कानो छोडेर रुन मन लाग्यो तर मिठाई समातेर केही नबोली दाैडिइन् उनी । बाख्राको सानो पाठी भएको गोठभित्र लुकेर रुन थालीन् ।
महानवमीको राती दुर्गा जाँतको लागि गाँज/देउरो सजाउन थाले भँडारघरमा । दमाहा, ट्याम्को र भोक्कर लगायतका बाजागाजाहरू पखाल्ने शुद्ध बनाउने काम हुन थाल्यो । गाउँभरिबाट आलम, शङ्ख र घण्टहरू प्रसादको रूपमा चढाउनेको ओइरो थियो । नर्मालाई भोक्करको आवाज सम्झना मात्रैले पनि बुवा घरमा नहुनुको पीडा झन् बुलन्द गराउँदै थियो ।
“मेरो पेट दुख्यो ! जा जा ! पल्लोघरकी काकी र खोलापारिकी बज्यैलाई बोलाएर ल्याइजा त !”
भनेर बेसरी पेट च्यापेर कराउँदै भुइँमा असिनापसिना हुँदै गरेकी आमा बेसरीलाई देखेर नर्मा आत्तिएर पहिला खोलापारि बज्यैलाई बोलाउन गइन् । उनले सुनेकी थिइन् कि नर्मा जन्मिँदा पनि उनका बुवा इन्डिया नै थिए र तिनै खोलापारिकी बज्यै मात्रै साहारा थिइन् त्यतिबेला ।
खोलापारि बज्यै आइपुगुन्जेल बेसरीकै चिच्याहटले पल्लो घरकी काकी आफै आइपुगिसकेकी थिइन् । बेसरी जगल्टा परेको कपालमा पसिनाले भिजेको शरीरमा दुवै हातले पेट च्यापेर बेस्सरी चिच्याइरहेकी थिइन् । एक्कासि नजिकैको दुर्गा मन्दिरमा शङ्ख र घन्ट जोरजोरले बज्न थाले । त्रिशूल र घण्टहरूबीच भयानक टकराव भएजस्तै आवाज सुनिन थाल्यो । बतास एकदमै शान्त भएर बहन थाल्यो । बिना गड्याङ्गुडुङ् आकाशमा एक झिल्को बलेको उज्यालोले मन्दिरका ध्वजापताकाहरू अन्तराष्ट्रिय स्तरमा खेल जितेपछि देशको झण्डा फहरिएजस्तै फहरिरहेका थिए । नर्मालाई पहिलोपटक देखेको यो दृश्य अनाैठो लाग्नु स्वाभाविकै थियो ।
भँडारघरः भण्डार घर, मकै, धान, गहुँज्ता अन्न भण्डारण गर्ने ठाउँ ।
देउरोः देवीदेवतालाई स-सम्मान पुज्न बनाइएको गह्रुङ्गो पुत्ला ।
भोक्करः सहनाईजस्तै जाँतमा बजाइने बाजा ।
कार्तिक ७, २०७७0comment